Iindaba malunga ne-iPhone | IPhone iindaba
Kwi-Actualidad iPhone siya kukusondeza yonke imihla ngoku inxulumene nelizwe lefowuni ka-Apple. Inkqubo ye- Amarhe ziyinxalenye ebalulekileyo kwaye, nangona ngamanye amaxesha zisigagamela kakhulu, zihlala zisibonisa Iinkcukacha eziza kubakho yeApple. Siza kuphinda sihlalutye imeko yentengiso ye-iPhone ngokuchasene nokhuphiswano kunye ne Uguquko lwe-iOS xa ithelekiswa ne-Android okanye iWindows Phone 8. Iindaba ezinxulumene ne-iPhone baya kuba nendawo yenu nonke.
I-Podcast 13 × 32: I-iOS 16 inokumangalisa ngaphandle kokuchukumisa uyilo
por ULuis Padilla yenzayo 15 mins .
Ngokutsho kweGurman iOS 16 iya kuzisa iindlela ezintsha zokusebenzisana nezixhobo zethu ukongeza kwizicelo "ezintsha". Ngaba ucinga ukuba kuya kubakho...
por Ingelosi Gonzalez yenzayo Iiyure ze8 .
I-Aqara isungula ivenkile yayo yemveliso kwiAmazon Spain
por ULuis Padilla yenzayo Iiyure ze11 .
I-Aqara isungula ivenkile yemveliso eAmazon Spain, apho sinokufumana khona iimveliso zayo ngokulula nangokukhawuleza…
por ULuis Padilla yenzayo Usuku olu-1 .
I-Bloomberg ikwavuma i-iPhone 15 ene-USB-C
por UAlex Vicente yenzayo Iintsuku ze3 .
Kukho amahemuhemu amaninzi afikelela kuthi mva nje malunga nohlengahlengiso olunokwenzeka lwezibuko lokutshaja lelandelayo...
por Ingelosi Gonzalez yenzayo Iintsuku ze4 .
I-Apple inokubandakanya i-USB-C kwi-iPhone 15 isithi ndlela ntle kuMbane
por Ingelosi Gonzalez yenzayo Iintsuku ze5 .
Isidibanisi soMbane seza kwi-iPhone 5 kwaye ukusukela ngoko ibisisidibaniso esisetyenziswa kuzo zonke ii-iPhones kunye…
I-Sonos inikezela ngesandi sayo esitsha, esifikelelekayo se-"Ray" kodwa sinomgangatho ofanayo njengesiqhelo
por ULuis Padilla yenzayo Iintsuku ze5 .
I-Sonos iveze izinto zayo ezintsha kwaye izisa isithethi esitsha kwigumbi lethu lokuhlala esiya kusenza sonwabele…
I-Podcast 13 × 31: Sala kakuhle kwi-iPod, hlala ixesha elide i-iPhone
por ULuis Padilla yenzayo Iintsuku ze6 .
I-Electra, i-CoolStar jailbreak kunye neCydia ye-iOS 11, ngoku iyafumaneka
Ungasifaka njani isatifikethi sedigital kwi-iPhone
Ke unokwazi ukuba mingaphi imizuzu yomculo owudlalileyo ngo-2017 kwiSpotify
I-Facebook Messenger ngoku ikuvumela ukuba ugcine iifoto kunye nevidiyo kwi-reel